Iyintoni i-Back Issue Comic Book?
Ekubeni iincwadi zoononongo ziphuma rhoqo ngenyanga, kukho ixesha elilodwa kuphela lobomi bencwadi yamahlaya enokuthi ithathwa njengomcimbi omtsha, kwaye yinyanga leyo ekhutshwa ngayo. Igama elithi "I-Back Back issue" libhekisela kwiincwadi ezinobomi ezize zifike phambi kwimiba ekhoyo ngoku. Ngokukhawuleza ukuba umcimbi wokugqibela ufikile, ukukhutshwa kweenyanga ezidlulileyo kubhekwe njengengxaki yomva.
Kutheni kubakho iziganeko ezilandelayo
Imibandela ye-comic emuva kwimibandela ibaluleke kakhulu njengento kumashishini amaphephancwadi, loo miba yabuya yatshatyalaliswa, iifestile zayo zihlanjululwe kwaye iifowuni zibuyiselwa kumvakalisi kwi-credit.
Oku kwenza abathengisi bamaphephancwadi ukuba baqoqe ezinye iilahleko zabo kwimibandela kwaye bangadlulanga umthwalo ngemicimbi elandelayo.
Akunjalo kwi-world book comic. Iingcamango zezinto ezingabuyiselwayo emva kwezinto zaziwa ngokuba yiNtengiso yeeNtengiso kwaye sele isuka kumgangatho wezoshishino kumthengisi wencwadi yamahlaya. Isitoreji sencwadi yamahlaya asikwazi ukubuyela oko akungathengisi nto leyo idla kwi-margin yabo yenzuzo. Ivenkile kufuneka ihlawule nokuthengiswa kwempahla engathengiswayo, ngelixa amaqhekeza abonakala amancinci angathatha indawo enkulu yokuthengisa inyanga emva kwenyanga.
Amashishini Adalwe Kwimiba Emuva
Abathengisi abaninzi baye basebenza kunye ekuncedeni ukudala i-sub-sector ezahlukeneyo kwiimarike zeencwadi zee-comic kunye nemiba elandelayo. Abanye abathengisi baya kugqithisa, bhodi, kwaye bagcine ezo ncwadi zee-comic zokuthengiswa kwexesha elizayo, kunye nemigca kunye nemigca yemicimbi yangemuva ukuba abalandeli bayisebenzise. Ngamanye amaxesha le micimbi iza kunyuka kwixabiso, kodwa ivenkile inamathele kuloo mali ityalomali kwi-comic ide ithengise.
Ukungabikho kokulungiswa okufanelekileyo kuye kwatshisa ngaphezu kwesitye enye esashiywe ngamatye kwizinto zokutya ezingenasemva.
Ezinye izitolo zikhangele ezinye iindlela zokukhupha iimpahla zabo ngokuthengisa ngeminyaka apho iimeko ezibuyiselwayo zihlulwa. Oku kubenza bakwazi ukucima i-inventory kwaye baqhubeke bephinda batyathele abanye abatyalo- mali .
Abanye baphendukela kwi-eBay okanye kwezinye iisayithi zokuthengiswa kwe-intanethi kwaye uzame ukuzenza flip apho. Ezinye ivenkile ziye zaphuma kwi-issue issue ye-issue kwaye zama ukulandelela ubuncinci obufunekayo kumbandela. Eminye imiba elandelayo ingakwazi ukuhlala kumashalofu okanye kwibhokisi iminyaka ngaphambi kokuba kuthengwe xa kuthengwa konke. Kukho iinkonzo zee-mail apho abafundi banokubuyisela khona imiba abaye bayiphoswa ngeposi. Njengoko ii-comics ezininzi ziqokelelwa kwaye zikhutshwe kwiifom zeencwadi ezibizwa ngokuthi "amashishini" imarike yimiba yokubuyela kwenyanga yanyanzelekile. Nangona kunjalo, kuya kuba soloko kuba ngabafundi befuna ukufaka kwiqoqo yabo okanye ukuthabatha imiba ephosakeleyo.
Into ebalulekileyo malunga nemiba engemuva kukuba xa ungena kwincwadi ethile yamahlaya, unokuqiniseka ukuba kukho ezinye zeemviwo zangaphambili apho kwaye unokukwazi ukugqiba loo miqulu yeencwadi zamahlaya. Ukubathanda okanye ukuwashiya, imiba yokubuyela iya kuqhubeka iyingxenye yokuqokelela ngexesha nje sineemarike ngqo.
Umhla woMlando we-Afrika-weMerika: 1990 - 1999
Yintoni ebangela i-Aurora Borealis Imibala?
Eyona ndlela ihamba phambili 'Ilisoloko ivuleka ePowladelphia'
Anne Hathaway kwi "Ella Enchanted" kunye neNkosikazi yakhe
UQeqesho lweZakhono zoQeqesho kunye noQeqesho lweeNgcaciso - Icandelo 1
Kutheni abantu beTester Taller Than Women